Ndị uwe ojii kpọtụrụ aha na nzuzo | Ngwọta OMG
Mgbe ndị uwe ojii na-ahụ maka US na-elezi anya nke ọma na ndị bi na ha na-eje ozi, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ejide igwefoto dị egwu iji kọọ mmekorita ha na ndị mmadụ n'ozuzu ha. Ndị uwe ojii na ndị na-akwado ikike dị otu a tụkwasịrị obi na ihe na-aga elekere ga-enyere aka iwe iwe megide ndị isi dịka mmụba ọfụma n'ụzọ ndị uwe ojii si emeso ndị bi. Ọ dị otu a, akụkọ ewepụtara maka izu nke ugbua na-akọwa etu ụlọ ọrụ iwu chọrọ ka esi agwa ndị mmadụ ka ha mepee emepe ihe banyere kamera ahụ — yana ndekọ ha kpọkọtara.
Mmetụta Ahụ Ahụ kamera na ndị mmadụ na ọnụego mpụ:
Igwefoto a na-ahụ maka igwefoto kacha ọhụrụ gosipụtara site na Nnọchi Nduzi na Civil and Human, na-arụ ọrụ na nzụlite na ụlọ ọrụ na-adụ ọdụ Upturn, nyochara ụlọ ọrụ ndị uwe ojii 50 US wee gosipụta ha na-arịa ọrịa na nnukwu akụkụ nke njirisi asatọ nyocha. Nkọwa ndị a gụnyere etu ndị uwe ojii si akwụgo nchebe nke ndị ha dekọtara, n'agbanyeghị agbanyeghị ndị ọrụ ikike ka ha nyochaa nyocha ha tupu ha edee akụkọ ha, kedu oke ndekọ a na-eme yana ma ndị ọrụ oge niile nwere ike ịhụ ihe nkiri ha gosipụtara. Otu ndi otu ndi mmadu noo n’otu ndi mmadu, ndi na eche nche na ndi isi ihe wulitere uzo n’ime May 2015 iji metuta otu ulo oru ga-esi wee mebe ihe ohuru a.
Onweghi otu n'ime nkebi ahụ nwetara ogo ngafe na klaasị niile. Ekwuru eziokwu dị ka 13 gafere ala n'ọtụtụ mpaghara, dị ka kwa Wade Henderson, onye isi oche na onye isi oche nke Leadership Conference, otu mgbakwunye mmadụ nwere onwe ya na 1950 ịgwa ndị otu dị iche iche gụnyere NAACP na ACLU aka. Lọ ọrụ ndị uwe ojii na Ferguson, Mo., na Fresno, Calif., Leghaara imezu nke ọ bụla anya. Ferguson gosipụtara echiche ụwa afọ abụọ tupu mgbe ndị uwe ojii nọ ebe ahụ gburu nwatakịrị onye America na-enweghị ọgụgụ isi na-enweghị mgbagha, Michael Brown, na-akpali gafee mba ahụ na-arụrịta ụka banyere ụzọ ikike iwu na-emeso obere ihe.
Na-echegbu onwe gị banyere iji kamera mmadụ:
Otu ndi mmadu nwere onwe ha na echegbu onwe ha na enwere ike iji mmemme biometric di iche iche wee nweta ya iji mata ndi mmadu di iche na ihe nkiri. Ntughari ihe ohuru achoro ime ka ndi mmadu na igwe onyonyo choro ikike ijikwa ya, gbakorita na ndu batrị nke akabeghi-agbanyeghi nke puru igbanwe oso dika ndi Taser International na ndi ozo ndi igwe onyo-igwe na-etolite ikike ndu. Ihe ọzọ bụ na ihu maka iwepu foto dị ka nke ugbu a.
Otu ndi oru ndi mmadu n’egwu ndi uwe ojii nwere ike iji igwefoto dika ihe eji eme ihe nlele mgbe ha na-ekiri ndi n’obere ebe, Henderson kwuru na mkparita uka nke ndi mmadu. Officeslọ ọrụ ole na ole emeghachiwo nchegbu ndị a site na-amanye ụkpụrụ nduzi iji mee ka ihe nkiri ghara ịdị mma n'anya tupu ọ dịrị. Ngalaba ndị uweojii na Baltimore bụ naanị otu onye n'ime otu afọ mbu nke otu onye isi nzukọ akara ngosipụta nke atụmatụ ya dị ugbu a na-amanye ihe nkiri biometric ugbu a. Mpempe akwụkwọ nzụkọ kachasị ọhụrụ gosipụtara na ndị uwe ojii na Baltimore County, Boston, Cincinnati, Montgomery County, Md., Na Parker, Colo., Nwere ikike mmachi ọzọ.
James Coldren, onye na-ahụ maka njikwa maka mmemme ndọrọ ndọrọ ọchịchị na CNA Institute for Public, nke na-enwetaghị uru ọhụụ na nyocha nyocha na-ekwu, anaghị ekwu maka ọdịmma ahụ. “Ọ dị ka ihe ọ bụla ọzọ. Biometrics nwere ike imepụta okwu ma ọ bụrụ na ejighị ya ma ọ bụ nyochaa ya na ndị nwere ebumnuche dị egwu na-eji ya etu ahụ. ”Coldren na William Sousa, onye isi nke Center for Crime and Justice Policy na Mahadum Nevada, Las Vegas, na-eme nchọpụta banyere Mmemme ndị na-agba ọsọ Departmentlọ ọrụ uwe ojii nke Las Vegas Metropolitan. Ha etinyebeghi aka na Nnọkọ ndu ndu ha achọpụtabeghị na nyocha ha na, mgbe ụfọdụ ihe mgbochi nwedịrị ike, ọfịs ndị uwe ojii na-akpọ igwefoto eyi. Coldren kwuru, sị: “Na Las Vegas nkewa ahụ chọpụtara na ihe ndekọ a bara uru maka ndị eziokwu na ndị jọgburu onwe ha maka ndị ga-akwụ ụgwọ," Coldren kwuru.
N'agbanyeghi ihe di ugbu a, ihe di iche na-ese karia ihe banyere ndu, Michael White, onye nkuzi banyere mpụ na Mahadum Arizona steeti nke nyochara igwe onyonyo nke ndi US maka United States of Justice (DoJ). “Anụla m mkparịta ụka gbasara ihe [iji biometụsị] mana amabeghị m maka ọgbakọ ọ bụla na-agbaga ngwa ngwa n'ụzọ ahụ ugbu a.” N'ime njirisi nke Nnọkọ Nnọkọ Mmepe a gbara gburugburu, ihe kachasị buru ibu gụnyere mgbe ndị isi dekọtara. na otú ha si nwee nchebe nchebe nke ndị ọ na-achị — karịsịa nke imejọ ndị mmadụ. Nchegbu dị otú ahụ agbasala dị ka ụfọdụ ọfịs na-eme ọwa YouTube maka ndekọ ha.
Nchegbu banyere ego igwefoto:
Ọtụtụ nkewa na-ezo aka na-eri dị ka ihe mgbochi iji tinye n'ọrụ ihe ọhụrụ. Igwefoto n’onwe ha nwere ike ịgbatị na ọnụego site na $ 300 gaa $ 800 maka onye ọrụ ọ bụla, yana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke dollar ji nwayọọ nwayọọ na-emefu ọnwa na ntinye vidiyo mgbe ọnwa ụfọdụ gasịrị. Expensesgwọ ahụ bụ ihe ọ bụla siri ike ịchọpụta: akụrụngwa, ịkwadebe na ịchekwa ozi. Dị ka ọmụmaatụ, ego nke itinye ego maka itinye ego na njiripụta ego na itinye ego na ntanetị, ka ọ bụrụ na ọ nwere ike, abụghị ihe niile dị mfe ịtụle, ka White, onye isi ngalaba otu na-azụ ma na-enyere aka ịkwado ụlọ ọrụ ikike iwu nke ọrụ igwefoto ya. bụ ndị DoJ's Bureau of Justice Assistance (BJA) Mmemme Pilot na-enweta ego. Agbanyeghị, White chere na enwere ike ịkwụ ụgwọ akụkụ nke ụgwọ ahụ. Ọ sịrị, "officesfọdụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii buru ibu na-akwụ $ 10 ma ọ dịkarịa ala nde afọ kwa afọ maka ihe jikọtara ọnụ," "Onweghi ohere igwefoto ndị mmadụ yi mebiri emebi belata ọnụ ọgụgụ ahụ, nke ahụ bụ ezigbo ihe.
The BJA jiri akara akara ya tufuo ihe nlere anya nke igwe onyonyo site na iji usoro 17 choro maka inye aka, tinyere ma agwara ndi isi mgbe ha choro imeputa igwefoto ahu ha na otu esi ebudata ihe ndekọ a na PC PC ha. Enwere ezigbo ihe ngosi dị mma na nhazi ndị a na-anakwere nyocha dị otú a: BJA agbapụwo karịa $ nde $ 90 $ 19 gaa na 73 n'ofe mba ahụ ịzụta ihe igwefoto dị egwu.
Ndị uwe ojii Ahụ na Ihe Nzuzo gbanwere ikpeazụ: September 26th, 2019 by admin
Nzuzo 2444 20 Echiche Taa
Razụlite nchegbu na Nchebe na Nzuzo karịrị ndị uwe ojii…